China JHPRO JH-65 umgangatho ophezulu umsebenzi onzima 65mm 1520W / 1700W umsebenzi onzima wombane wokutshabalalisa umbane wejack Hammer mveliso kunye nabenzi | Jiahao
I-JHPRO JH-65 kwizinga eliphezulu Umsebenzi onzima 65mm 1520W / 1700W Umsebenzi onzima woMbane wokuDiliza uJack Hammer
Isando sokudiliza iJHPRO sisetyenziselwa ukubeka umbhobho, ukufakela oomatshini, unikezelo lwamanzi kunye neendawo zokuhambisa amanzi, ukuhonjiswa ngaphakathi, amazibuko kunye nolunye ulwakhiwo lobunjineli. Sigxile ekuveliseni izixhobo ezikumgangatho ophezulu ezinokuthenjwa ukuhambisa ukusebenza okuphezulu. Ke ukuba ujonga isando sokudiliza esinexabiso elinamandla okwenza imisebenzi enzima njengokufaka iingcango ezityibilikayo zokuhlaziya indlu yakho yangasese, iJH65 lukhetho oluhle kakhulu.
I-JH65 yityhefu yentsimbi yokuchithwa kwealuminium. Ifakwe kwi-45 * 94mm imoto yocingo lobhedu, amandla e-1520W kunye ne-1700W kwiiklinikhi ukuba zikhethe, Inokuhlangabezana neemfuno zomsebenzi onzima ophukileyo. I-JHPRO ibanga lobungcali lesando sombane liphupha lomqhubi njengoko likhawuleza ngamandla aphezulu, likhululekile ukubamba. Isando siza kunye nomgangatho olungileyo we-chisel kunye nentsimbi.
1.Umsebenzi onzima, owomeleleyo owakhiwe ngesando sombane ngombane kunye ne-1520W / 1700W yamandla kunye ne-1900r / min yefuthe lokuhamba rhoqo. Itekhnoloji eyomeleleyo yesiseko ihlangabezana nezona zicelo zinzima.
2. Iijoule ezingama-45 (31lbs) zamandla eempembelelo zisa amandla, ukusebenza okuphezulu, i-1900 BPM yokudiliza ngokukhawuleza okukhulu, Ukonakaliswa kwendawo enzima kulwakhiwo, njengekhonkrithi, ilitye, izitena, iipavumente, njl njl.
3. Esi sando sombane sinee-360 degrees ezijikelezayo ngaphambili kwisibambiso sokujikeleza konke. Irabha evulekileyo emise okwe-D emva nangokubamba ukungcangcazela ukunciphisa ukudinwa kwabaqhubi.
4. Iqokobhe lokhuselo lokuqina elomeleleyo elinamacandelo esinyithi aqinileyo ngaphakathi. Isiciko esikhuselayo esinomoya wokutshabalalisa ubushushu ngokukhawuleza. Isingxobo kwiingcambu zekhebula siphakamisa ukuzinza komatshini.
I-JH-65 Ukucaciswa Izixhobo
Ikaliwe amandla okufaka: 1520W
Ixabiso lempembelelo: 1700Bpm
Impembelelo yamandla: 45J
I-NW / GW: 14 / 21KG I-Hex point chisel: 1pc 30 * 400mm
I-JH-65A Ukucaciswa Izixhobo
Egqithileyo I-JHPRO JH-65B Ukudilizwa kweJack Hammer Electric Concrete Breaker
Okulandelayo: I-JHPRO JH-80B AMANDLA ISIXHOBO SOKUPHATHA I-HAMMER 1700W
1520w / 1700w Isando esiphakamileyo samandla
Ukuchithwa kwehammer eyi-65mm
I-JHPRO JH-150 ene-2 ​​Chisel Bits Umbane weDemoli ...